Kwihlabathi lanamhlanje, abantu abafanekanga bashiywe. Ngokuqhelekileyo, usuku lomntu oqhelekileyo lubekwe ngokuchanekileyo, kwaye umsebenzi uthatha inxalenye enkulu yexesha. Ngoko, akumangalisi ukuba ezininzi zokuthandana kunye nokuthandana kwenzeka kumsebenzi. Kusemsebenzini abantu banethuba lokuba bazane kakuhle, bathetha ngokubanzi kunye nokwakha ubudlelwane, ngaphandle komsebenzi eli thuba alinikiweyo kuwo wonke umntu. I-romance romance ibilokhu isisigxina sokugwetywa nokuhlekwa, ngamanye amaxesha nguye nguye owabangela ukuba kuvele umsebenzi wokukhangela okanye ukuxoshwa ngokukhawuleza. Ngoko yintoni na - iphutha okanye isigqibo esilungileyo kubantu abangabodwa?
Uthando okanye ukudlala ngothando kunokusinceda silwe nemvakalelo engathandekiyo kwaye sinciphise uxinzelelo. Emsebenzini, njengokuba ebomini bakho, izinto zihamba ngendlela eyahlukileyo - ngoko siyavuya kukuba yonke into ilungile, ngoko ukuphelelwa lithemba, ukuba yonke into imbi. I-romance yenkonzo idla ngokubangela ukuba ubudlelwane obunzima kwiqela, ukunganeliseki ngomvuzo okanye isidingo sokwenza izigqibo ezinzima. Iimvama kaninzi azibilisi apho yonke into izolile kwaye iqikelele. Incwadana yenkonzo yinto eqhelekileyo kwintsebenziswano yabantwana kunye nasekuphuhliseni amafemu.
Kukholelwa ukuba ubudlelwane kwindawo yokusebenzela luqaliswa kuphela ngabaphathi, kodwa oku akunjalo. Ngaphantsi kwefuthe loxinzelelo, umntu uzama ukuhlawula iimvakalelo ezingathandekiyo, ingakumbi ukuba ayinakuchaphazela imeko. Ngoko ke, inkonzo yothando ingenzeka kumphathi kunye nonobhala, kunye nomphathi kunye nomgcini-mali, kunye nomlindi kunye nomgcini we-waitress.
Uthando emsebenzini ludla ixesha lokunciphisa uxinzelelo, kodwa phantse njalo eli xesha likhula libe yinkalo eyongeziweyo, ngakumbi ukuba ubuhlobo buya kubonakala kuwo wonke umntu kwaye ukuba umntu ovela kwisi sibini akayinyaniseki ngokupheleleyo. Yile ndlela "ilinen ecocekileyo" iboniswa ngayo ukuhlolwa koluntu.
Ubudlelwane ngenxa yemisebenzi yinto eqhelekileyo. Ngokukodwa ngokuqhelekileyo le ndlela yokufumana ukwanda okwenziwe ngabantombazana abancinci, abanomdla nabangenamava. Ulutsha kunye nobuhle lunokunceda ekunqweneleni ukuthatha isikhundla esincomekayo. Kodwa, xa umkhwa uqala ukusebenza, ezi zihlonipheko, ngokusemthethweni, ziyabuyela kwimvelaphi. Ingakumbi impazamo enkulu yeengcali ezincinci ukupheliswa kobudlelwane nomntu obancedise ekukhuthazeni, xa befezekisa injongo yabo. Bambalwa abantu bacinga ukuba ukukopela okanye ukuxabana okuqhelekileyo kunokubuyisela yonke into kwisikwere esinye. Omnye onamandla okukunyusela, nje ngokulula ukutshisa. Ngoko ke, ubudlelwane ngenxa yemisebenzi yingozi enkulu.
Phakathi kwamantombazana, kukho iingcamango malunga nendlela abaqashi abahloniphekileyo abadala abazama ngayo ukusondelana, besongela ukuxothwa. Ukutsho ukuba oku kwenzekayo akunangqondo. Kukho neemeko ezinjalo ukuba intombazana iphoqelelwe ukuba ivumelane ne-romance yenkonzo ukuze ingaphumeleli umsebenzi.
Ukuze kungabi nakweli ndawo, kubalulekile ukwazi ukuba kulula ukuchaphazela ababuthathaka. Ukuba unemfundo, ukuba unendawo yakho, ukuba umsebenzi uya kwenziwa, ngoko ngexesha uya kuba yintsimi eyaziwayo, ukulahlekelwa ngumqeshi kunokulahlekelwa. Ngoko ke, ubugcisa yinto kuphela ekhusela phantsi kweemeko ezifanayo.
Kodwa kwenzeka kwakhona ukuba emsebenzini apho abantu ababini abadalwa kuphela. Iingcali zengqondo zincoma ukuba ungayishiyi isipho eso, kodwa zama ukukhawuleza ukuguqulela i-romance kwinkonzo kwenye indawo. Ngokomzekelo, omnye wabathandi bangabheka umsebenzi kwenye indawo ukuba uceba ulwalamano olunzulu. Oku kuyimfuneko kuba kunzima abantu ukugcina ubudlelwane obuhle, bejikeleze iwashi malunga newashi. Oku kunokuthi kubangele ukuba abantu baxakeke ngokukhawuleza, baqale ukuhambisa iingxaki zomsebenzi kwintsapho, kunye neentsapho-ukusebenzela. Imeko engangcikiyo ingaba kukuba umntu wenqaba ukwenza izabelo, ngenxa yokuba indlu inokuphikisana. Ngoko ke, ukuze kungabikho mngcipheko, kungcono ukusabalalisa kwiifisi ezahlukeneyo okanye ubuncinci kumasebe ahlukeneyo.
I-romance yesevisi ihlala ilukhuni. Kuyinto engabonakaliyo, ukuhleka, imfuneko yokufihla ubudlelwane kunye nomngcipheko wokuba yimeko ephezulu kakhulu xa uthando luphela. Ukugqiba ukuba ngaba kukhethwa ngumntu wonke. Enyanisweni, ukuyeka uthando olukhulu, ngenxa yokuba wadibana nomsebenzi, akunakwenzeka. Kususela nasiphi na isikhundla sisoloko siphuma indlela, kwaye ukuqonda ngokubanzi kuya kunceda ukuwufumana, nangona iimvakalelo ezinamandla.
Iintlobo kunye neqhinga lomsebenzi we-freelancer
Indlela yokuba ngumgcini-mali oyintloko?
Khetha uqeqesho oluyimfuneko
Ukuphumla okuncedo kwimisebenzi kunye nemicimbi
Izizathu zokuthintela ukufumana umsebenzi omhle kwaye uhlale kuyo
Iklasi loqoqosho locwangciso
Indlela yokuhlamba ipenki yokupaka kwizinto ezahlukeneyo
Indlela yokugcina intombi-ntombi
Ukuthintela nokunyangwa kwama-cystic
Indlela yokukhangela inhlanhla kunye nemali ye-feng shui
Bhaka inkuni enomnandi nephunga
I-appetizer ene-spicy ye-brynza kunye namantongomane
Ukunyaniseka kwamadoda kumhlobo wesetyhini
Iidiliya kwiJelly yogurt
Yintoni intombazana enokuyenza ngayo kanye ebomini bakhe?
Unyango ngamatye atshisayo